Mooshin Ku saabsan Aqoonsiga Qaddiyada Somaliland oo La hor dhigayo Aqalka Congres-ka Maraykanka | WWW.SOMALILAND.NO
Mooshin Ku saabsan Aqoonsiga Qaddiyada Somaliland oo La hor dhigayo Aqalka Congres-ka Maraykanka
Washington (somaliland.no)- Aqalka Congreska Maraykanka ayaa la filayaa in la soo hordhigo Mooshin ku saabsan sidii dawlada Maraykanka culays loogu saari lahaa in ay aqoonsato Somaliland.
Mooshin qabyo ah oo dhigaya in Congressku maamulka Madaxweyne Bush ka dalbado in uu Somaliland u aqoonsado dal madax banaan ayaa diyaarintiisa lagu guda jiraa, waxaana loo bandhigay xubno ka tirsan Aqalka Congresska Maraykanka .
sida ay baahisay Shabakada Wararka ee Addis Horn , Mooshinkan waxa diyaariyay koox la baxday saaxiibada Ummada Somaliland , waxaanu ku boorinaynaa dawlada Maraykanka in ay Somaliland u aqoonsato dal madax banaan oo leh Xududuudihiisii gumaysiga , taas oo ay u arkaan in ay tahay xirfad diblomaasiyadeed oo suurta galin karta in Nabad lagaga dhaliyo gobolka Geeska Afrika.
Mr. Patrick Linbery , oo madax ka ah garabka Maraykanka ee golahan diyaarinaya Mooshinka ayaa la kulmay xubno golaha Congresska ka tirsan si uu ugala doodo hor dhaca Mooshinka qoraalka ah oo dhigaya in Somaliland loo aqoonsado dal madax banaan .
Waxa uu Mr Patrick hadalkan ka sheegay shir saxaafadeed ay kooxdani qabteen.
“Hadda waxa aanu kuguda jirnaa sidii aanu u heli lahayn cid naga caawisa Mooshinkan sidii loo hor dhigi lahaa mid ka mid ah labada aqal ee sharci dajiyayaasha Marayhkanka.
hore ayaanu u tusnay xukuumada Somaliland iyo qolyaha Somaliland uga dooda Maraykanka , sidoo kale bilow ahaan waxaan ula kulmay xubno ka tirsan golaha Senatarka iyo Congress-kaba , kuwaas oo aan u arko muhiim’’ sidaa ayuu yidhi Mr Patrick oo u waramayay Wakaalada Addis Horn .
sida laga war qabo waxa dhawaan dalka Maraykanka safar ku tagay Madaxweynaha JSL Mudane Daahir Rayaale Kaahin , kuwaas oo magaalada Washigton kulama kula yeeshay Masuuliyiin ka tirsan Wasaarada Arrimaha Dibada , Hay’adaha Maraykanka u qaabilsan Horumarinta ee USAID iyo Wasaarada Difaaca Maraykanka iyo xubno ka tirsan golaha amniga Qaranka.
« Saraakiil la sheegay inay ka tirsan yihiin Milateriga Maraykanka oo Diyaar khaas ah shalay ku yimi Hargeysa Ogeysiis Shir Jaaliyadda Norway ee Oslo Axad 03.02.08 Goobta Xarunta Jaaliyadda »